Marketing, varotra ary serivisy: ny lalàna mifehy ny fifandraisan'ny mpanjifa | Martech Zone
Marketing, varotra ary serivisy: ny lalàna mifehy ny fifandraisan'ny mpanjifa
Alatsinainy Desambra 9, 2013 Alatsinainy Desambra 9, 2013 Kelsey Cox
Satria ny media sosialy dia manome feo mafy kokoa ho an'ny mpanjifa noho ny teo aloha, ireo orinasa hendry indrindra dia manova ny fomba hanatonany ny marketing, ny serivisy ho an'ny mpanjifa ary ny varotra. Isan'andro, ny mpanjifa amerikana dia mitazona resaka mifandraika amin'ny marika 2.4 miliara. Ahoana ny fomba hitenenana ny orinasanao? Ny mpanjifa sambatra dia sakaiza akaiky indrindra amin'ny orinasa iray ary hanampy anao hahatakatra ny fitsipika vaovao amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa, SAP dia nanangona ny fampahalalana rehetra ilaina amin'ny infographic etsy ambany.
Na dia zava-dehibe aza ny vokatra ampiasain'ny orinasa iray, ny 40% monja amin'ny fahavononan'ny olona hanolotra soso-kevitra ny orinasa dia miankina amin'ny fahitany ny vokatra ary ny 60% dia voafaritry ny fahitan'izy ireo ny orinasa ihany. Na dia tsy voafehin'ny orinasa iray intsony aza ny fifanakalozan-kevitra manodidina ny orinasan-dry zareo, dia azon'izy ireo atao tsara ny mijery azy sy mamolavola azy amin'ny hazavana tsara indrindra.
Raha resaka varotra dia mila mirotsaka an-tsehatra ny mpanjifa ary afaka manao izany ny orinasa marani-tsaina amin'ny alàlan'ny fahatakarana ireo fanamby tsy manam-paharoa ataon'ny mpanjifany, mifandray amin'izy ireo alohan'ny hamolavolana ny fahitan'izy ireo ary famoronana traikefa mividy tsara izay tsy andriny hilazana amin'ny namany .
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa manerantany dia zava-dehibe amin'ny famoronana mpiaro ny mpanjifa. 59% ny mpanjifa dia vonona ny hanandrana marika vaovao hahazoana serivisy ho an'ny mpanjifa tsara kokoa. Raha fantatrao bebe kokoa momba ny mpanjifanao noho ny fantany momba anao dia azonao antoka fa resahina be foana ny marikao.
Tags: raharaham-barotrafiaraha-mientan'ny mpanjifafitadiavana mpanjifaSerivisy ho an'ny mpanjifa-barotraFanamafisana ny varotrahaino aman-jery sosialy
SEO mifanohitra amin'ny SEO Vaovao
Lahatsoratra mahaliana! Notsongaina tsara tamin'ny alàlan'ny sary momba ny info. Manaiky tanteraka fa ny mpanjifa sambatra dia naman'ny orinasa lehibe indrindra